ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၄ အတွက် ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ – Sport Gaber
၁~ပဲလေ့စ် vs တော့တင်ဟမ်
၃ ပွဲကစား ၉ မှတ်နဲ့အတူ တော့တင်ဟမ်ဟာ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ပုံပြင်တွေ မန်နေဂျာသစ် ရှာပုံတော်တွေ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက် စပါးတို့ ယခုလိုမျိုး တာထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူ ခန့်မှန်းမိခဲ့မှာလဲ? ပဲလေ့စ်ကလည်း မန်နေဂျာသစ်ကို ခန့်အပ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဗီအဲရာ အတွက် ကတော့ လွယ်ကူတဲ့ ကံကြမ္မာတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၀က်ဟမ်းနဲ့ ၂-၂ ပွဲစဉ် ကတော့ ပဲလေ့စ် အတွက် ရမှတ်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို လျှော့ချဖို့ အတွက် ရမှတ်တွေ စတင်စုစည်းထားနိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဒီပွဲဟာ အကြိတ်အနယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စပါးဟာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကစားကာ တန်ပြန်တိုက်စစ် ကနေ ဆွန် ကိန်း တို့ရဲ့ အားနဲ့ ထိုးနှက်သွားဖို့ လုပ်သွားမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့့်လည်း ဒီပွဲမှာ စပါးတို့ ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။
၂~အာဆင်နယ် vs နော့ရစ်ခ်ျ
ဇယားအောက်ဆုံးက အာဆင်နယ်ဟာ နော့ဝှစ်ကို အမ်းမရိတ်မှာ မဖြစ်မနေ အနိုင်ရအောင် ကစားသွားရမှာပါ။ ဒါဟာ အာတီတာ အတွက် အရမ်းကို အရေးပါလှပြီး နှစ်သင်းစလုံးဟာ ခက်ခဲတဲ့ တာထွက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မန်နေဂျာ နှစ်ဦးစလုံး ဒီလို ရမှတ်ဗလာနဲ့ တာထွက်ခဲ့မှုကို ပျော်ရွှင်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အီတီဟတ်မှာ ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ် အတွက် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်ကာလဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ ပြန်ရဖို့ အတွက် အကူအညီ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ လုံလောက်တဲ့ ကောင်းမွန်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ အာဆင်နယ် အနေနဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာတော့ အနိုင်ရအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ အာတီတာသာ သူ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေကို ပြန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ အနိုင်ရလ်ိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဂန်းနားတို့ ၃-၀ နဲ့ နိုင်မယ်လို့ ရွေးချယ်ပါတယ်။
၃~လက္စတာ vs မန္စီးတီး
ဒီပွဲဟာ သမိုင်းကြောင်းအရ မန်စီးတီးအတွက် အမြဲတမ်း ခက်ခဲတဲ့ ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြေခွေးပြာတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက ကွန်မြူနတီဒိုင်းမှာလည်း စီးတီးကို အသာရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နည်းပြရော်ဂျာဟာ ဒီပွဲကနေ သူ့ရဲ့ အသင်း တစ်စုံတစ်ခု ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မှု ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ စီးတီးဟာ နော့ရစ်ခ်ျနဲ့ အာဆင်နယ် တို့ကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းထားခဲ့ပါတယ်။ စပါးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အဖွင့်ပွဲစဉ်ဟာ အဝေးကြီးမှာ ကျန်နေခဲ့သလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီး စီးတီးရဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေဟာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ လက်စတာတို့ အီတီဟတ်မှာ ဂိုးသွင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စီးတီးကတော့ လက်စတာကို အနိုင်ယူဖို့အတွက် အားခဲနေမှာ သေချာပါတယ်။ ဂရီလစ်ခ်ျဟာ စီးတီးမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း အံ၀င်လာခဲ့ပြီး ဒီပွဲမှာ စီးတီးကို အနိုင်ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ မန်စီးတီးတို့ ၃-၁ နဲ့ နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းချင်ပါတယ်။
၄~မန်ယူနိုက်တက် vs နယူးကာဆယ်
ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီပွဲမှာ ယူနိုက်တက် အတွက် သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် debut ကို လုပ်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ သူ ပွဲထွက်ခွင့် ရမလား? ဒါကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ယူနိုက်တက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က ဝုဖ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး အဝေးကွင်း စံချိန်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ဆိုးရှားရဲ့ အသင်းဟာ ခံတပ်တစ်ခု အဖြစ် တည်ဆောက်လိုနေပါတယ်။ အမှတ်ပေးဖလားကို စိန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ အိမ်ကွင်းရလဒ်တွေ အထူးကောင်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နယူးကာဆယ် ကတော့ ဒီရာသီ ဇယားလယ်မှာပဲ အဆုံးသတ်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ဒီအချိန်မှာ နယူးကာဆယ်ဟာ ဒီလို နေရာမျိုးမှာ အမှတ်ရယူနိုင်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေပါတယ်။ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ အခုဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ မြင့်တက်လျက် ရှိနေပြီး ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရမယ့် အသင်း ၁ သင်းသာ မြင်ပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တို့ ၂-၀ နဲ့ နိုင်သွားမှာပါ။
၅~ချဲလ်ဆီး vs အက်စတွန်ဗီလာ
အန်ဖီးမှာ ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံး ၁၀ ယောက်တည်းနဲ့ ကစားခဲ့ရပေမယ့် ချဲလ်ဆီးဟာ ထိုက်တန်တဲ့ သရေတစ်မှတ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သောမတ်တူချယ်ဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းကို တအား စုစည်းမှုကောင်းအောင် တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီရလဒ်ဟာ သိပ်ပြီး အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပွဲမှာလည်း ချဲလ်ဆီးတို့ နိုင်ပွဲမရဖို့ အခြေအနေ နည်းပါးပါတယ်။ လူကာကူဟာ ချဲလ်ဆီးတို့ နောက်ဆုံး လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ၎င်းရှိနေခြင်းဟာ ချဲလ်ဆီးကို ပြီးပြည့်စုံသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဗီလာ ကတော့ ဒီပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းဖို့ အတွက် တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေကို ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့ ခံစစ်ကစားပုံ အထူးကောင်းမွန်နေဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရမယ် ဆိုရင် ဗီလာတို့ ဒီပွဲကနေ တစ်စုံတစ်ရာ ရယူနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ရှင်အသင်းပဲ ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၆~လိဒ် vs လီဗာပူး
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရိတ်သတ်တွေကို အထူးဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ လိဒ်ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ လီဗာပူးကို လက်ခံကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီပွဲဟာ တကယ့်ကို ကြည့်ကောင်းမယ့် ပွဲပါပဲ။ လိဒ်ဟာ စွမ်းအင်အပြည့်နဲ့ ကစားသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် လီဗာပူးတို့ ပွဲအစပိုင်းမှာ စိတ်ရှည်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လိဒ်ရဲ့ ကစားပုံကို ကြည့်ရတာ တကယ်ကောင်းပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားပုံကြောင့် လီဗာပူးရဲ့ ဗျူဟာထဲ ကျရောက်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ သူတို့ကို ဖွင့်ကစားတဲ့ အသင်းတွေကို ထိုးနှက်နိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ အပြည့်အစုံ ရှိနေပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ သွင်းဂိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ သေချာပေါက် မြင်တွေ့ သွားရမှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူးတို့ လိဒ်ကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင်ယူကာ မာဆေးဆိုက်ကို အနိုင် ၃ မှတ်နဲ့ ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘရန့်ဖို့ဒ် ၁-၁ ဘရိုက်တန်
ဆောက်သမ်တန် ၁-၂ ၀က်ဟမ်း
၀က်ဖို့ဒ် ၀-၁ ဝုဖ်
အဲဗာတန် ၂-၀ ဘန်လေ
၁~ပဲလေ့ဈ vs တော့တငျဟမျ
၃ ပှဲကစား ၉ မှတျနဲ့အတူ တော့တငျဟမျဟာ အမှတျပေးဇယားရဲ့ ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ ပုံပွငျတှေ မနျနဂြောသဈ ရှာပုံတောျတှေ ပွီးဆုံးခဲ့ပွီးနောကျ စပါးတို့ ယခုလိုမြိုး တာထှကျနိုငျလိမျ့မယျလို့ ဘယျသူ ခနျ့မှနျးမိခဲ့မှာလဲ? ပဲလေ့ဈကလညျး မနျနဂြောသဈကို ခနျ့အပျထားခဲ့ပမေယ့ျ ဗီအဲရာ အတှကျ ကတော့ လှယျကူတဲ့ ကံကွမ်မာတော့ မဟုတျခဲ့ပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဝကျဟမျးနဲ့ ၂-၂ ပှဲစဉျ ကတော့ ပဲလေ့ဈ အတှကျ ရမှတျကောငျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ စိုးရိမျမှုကို လြှော့ခဖြို့ အတှကျ ရမှတျတှေ စတငျစုစညျးထားနိုငျဖို့တော့ လိုအပျနပေါတယျ။
ဒီပှဲဟာ အကွိတျအနယျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ စပါးဟာ စိတျရှညျရှညျနဲ့ ကစားကာ တနျပွနျတိုကျစဈ ကနေ ဆှနျ ကိနျး တို့ရဲ့ အားနဲ့ ထိုးနှကျသှားဖို့ လုပျသှားမှာပါ။ ဒါ့ကွောင့ျ့လညျး ဒီပှဲမှာ စပါးတို့ ၁-၀ နဲ့ အနိုငျရသှားလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတောျ ရှေးခယြျခငြျပါတယျ။
၂~အာဆငျနယျ vs နော့ရဈချြ
ဇယားအောကျဆုံးက အာဆငျနယျဟာ နော့ဝှဈကို အမျးမရိတျမှာ မဖွဈမနေ အနိုငျရအောငျ ကစားသှားရမှာပါ။ ဒါဟာ အာတီတာ အတှကျ အရမျးကို အရေးပါလှပွီး နှဈသငျးစလုံးဟာ ခကျခဲတဲ့ တာထှကျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျလညျး မနျနဂြော နှဈဦးစလုံး ဒီလို ရမှတျဗလာနဲ့ တာထှကျခဲ့မှုကို ပြောျရှှငျနမှောတော့ မဟုတျပါဘူး။
အီတီဟတျမှာ ဂိုးပွတျရှုံးခဲ့ပွီးနောကျ အာဆငျနယျ အတှကျ နိုငျငံတကာ ပှဲစဉျကာလဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှေ ပွနျရဖို့ အတှကျ အကူအညီ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျရဲ့ ခွစှေမျးဟာ လုံလောကျတဲ့ ကောငျးမှနျမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ အာဆငျနယျ အနနေဲ့ ဒီလိုပှဲမြိုးမှာတော့ အနိုငျရအောငျ လုပျသင့ျပါတယျ။ အကယျ၍ အာတီတာသာ သူ့ရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှကေို ပွနျရခဲ့မယျဆိုရငျ သူတို့ အနိုငျရလျိမျ့မယျလို့ ကြှနျတောျ ထငျပါတယျ။ ကြှနျတောျ ကတော့ ဂနျးနားတို့ ၃-၀ နဲ့ နိုငျမယျလို့ ရှေးခယြျပါတယျ။
၃~လက်စတာ vs မန်စီးတီး
ဒီပှဲဟာ သမိုငျးကွောငျးအရ မနျစီးတီးအတှကျ အမွဲတမျး ခကျခဲတဲ့ ပှဲစဉျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ မွခှေေးပွာတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့လက ကှနျမွူနတီဒိုငျးမှာလညျး စီးတီးကို အသာရခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောင့ျ နညျးပွရောျဂြာဟာ ဒီပှဲကနေ သူ့ရဲ့ အသငျး တဈစုံတဈခု ရယူနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျမှု ရှိနမှော ဖွဈပါတယျ။ အခွားတဈဖကျမှာတော့ စီးတီးဟာ နော့ရဈချနြဲ့ အာဆငျနယျ တို့ကို ဂိုးပွတျခြမှေုနျးထားခဲ့ပါတယျ။ စပါးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ အဖှငျ့ပှဲစဉျဟာ အဝေးကွီးမှာ ကနြျနခေဲ့သလို ဖွဈနခေဲ့ပွီး စီးတီးရဲ့ တိုကျစဈနဲ့ ပကျသကျပွီး စိုးရိမျမှုတှဟော ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတောျ ကတော့ လကျစတာတို့ အီတီဟတျမှာ ဂိုးသှငျးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။ စီးတီးကတော့ လကျစတာကို အနိုငျယူဖို့အတှကျ အားခဲနမှော သခြောပါတယျ။ ဂရီလဈချဟြာ စီးတီးမှာ တဈဖွညျးဖွညျး အံဝငျလာခဲ့ပွီး ဒီပှဲမှာ စီးတီးကို အနိုငျရအောငျ လုပျပေးနိုငျလိမ့ျမယျလို့ ကြှနျတောျ ထငျပါတယျ။ မနျစီးတီးတို့ ၃-၁ နဲ့ နိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးခငြျပါတယျ။
၄~မနျယူနိုကျတကျ vs နယူးကာဆယျ
ရောျနယျဒိုဟာ ဒီပှဲမှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ သူ့ရဲ့ ဒုတိယမွောကျ debut ကို လုပျသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ သူ ပှဲထှကျခှင့ျ ရမလား? ဒါကိုတော့ စောင့ျကွညျ့ရမှာပါ။ ယူနိုကျတကျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ ပတျက ဝုဖျကို ခကျခကျခဲခဲ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး အဝေးကှငျး စံခြိနျတငျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒီရာသီ အိုးထရပျဖို့ဒျကို ဆိုးရှားရဲ့ အသငျးဟာ ခံတပျတဈခု အဖွဈ တညျဆောကျလိုနပေါတယျ။ အမှတျပေးဖလားကို စိနျခေါျခငြျတယျဆိုရငျ ယူနိုကျတကျ အနနေဲ့ အိမျကှငျးရလဒျတှေ အထူးကောငျးနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
နယူးကာဆယျ ကတော့ ဒီရာသီ ဇယားလယျမှာပဲ အဆုံးသတျမယျလို့ ကြှနျတောျ မြှောျလင့ျထားပါတယျ။ ကံမကောငျးစှာနဲ့ ဒီအခြိနျမှာ နယူးကာဆယျဟာ ဒီလို နရောမြိုးမှာ အမှတျရယူနိုငျဖို့ အလှမျးဝေးနပေါတယျ။ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ အခုဆိုရငျ စိတျလှုပျရှားမှုတှေ မွင့ျတကျလကြျ ရှိနပွေီး ကြှနျတောျ ကတော့ ဒီပှဲမှာ အနိုငျရမယ့ျ အသငျး ၁ သငျးသာ မွငျပါတယျ။ မနျယူနိုကျတို့ ၂-၀ နဲ့ နိုငျသှားမှာပါ။
၅~ခြဲလျဆီး vs အကျစတှနျဗီလာ
အနျဖီးမှာ ဒုတိယပိုငျးတဈပိုငျးလုံး ၁၀ ယောကျတညျးနဲ့ ကစားခဲ့ရပမေယ့ျ ခြဲလျဆီးဟာ ထိုကျတနျတဲ့ သရတေဈမှတျကို ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သောမတျတူခယြျဟာ သူ့ရဲ့ အသငျးကို တအား စုစညျးမှုကောငျးအောငျ တညျဆောကျထားနိုငျခဲ့တာကွောင့ျ ဒီရလဒျဟာ သိပျပွီး အံ့သွစရာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒီပှဲမှာလညျး ခြဲလျဆီးတို့ နိုငျပှဲမရဖို့ အခွအေနေ နညျးပါးပါတယျ။ လူကာကူဟာ ခြဲလျဆီးတို့ နောကျဆုံး လိုအပျနတေဲ့ ကစားသမား ဖွဈပွီး ၎င်းငျးရှိနခွေငျးဟာ ခြဲလျဆီးကို ပွီးပွညျ့စုံသှားစခေဲ့ပါတယျ။
ဗီလာ ကတော့ ဒီပှဲမှာ ရလဒျကောငျးဖို့ အတှကျ တနျပွနျတိုကျစဈတှကေို ကောငျးစှာ အသုံးခနြိုငျဖို့နဲ့ ခံစဈကစားပုံ အထူးကောငျးမှနျနဖေို့ လိုအပျမှာပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပွောရမယျ ဆိုရငျ ဗီလာတို့ ဒီပှဲကနေ တဈစုံတဈရာ ရယူနိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောင့ျ အိမျရှငျအသငျးပဲ ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုငျရသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။
၆~လိဒျ vs လီဗာပူး
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရိတျသတျတှကေို အထူးဖြောျဖွနေိုငျခဲ့တဲ့ လိဒျဟာ အိမျကှငျးမှာ လီဗာပူးကို လကျခံကစားရမှာ ဖွဈပွီး ဒီပှဲဟာ တကယျ့ကို ကွညျ့ကောငျးမယ့ျ ပှဲပါပဲ။ လိဒျဟာ စှမျးအငျအပွည့ျနဲ့ ကစားသှားမှာ ဖွဈတာကွောင့ျ လီဗာပူးတို့ ပှဲအစပိုငျးမှာ စိတျရှညျသှားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လိဒျရဲ့ ကစားပုံကို ကွညျ့ရတာ တကယျကောငျးပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ တိုကျစဈဖှင့ျကစားပုံကွောငျ့ လီဗာပူးရဲ့ ဗြူဟာထဲ ကရြောကျသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ လီဗာပူးဟာ သူတို့ကို ဖှင့ျကစားတဲ့ အသငျးတှကေို ထိုးနှကျနိုငျတဲ့ လကျနကျတှေ အပွည့ျအစုံ ရှိနပေါတယျ။ ဒီပှဲစဉျမှာ သှငျးဂိုးတှကေို ကြှနျတောျတို့ သခြောပေါကျ မွငျတှေ့ သှားရမှာပါ။ ကြှနျတောျ ကတော့ လီဗာပူးတို့ လိဒျကို ၂-၁ နဲ့ အနိုငျယူကာ မာဆေးဆိုကျကို အနိုငျ ၃ မှတျနဲ့ ပွနျသှားလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
အခွား ပှဲစဉျတှအေတှကျ ခနျ့မှနျးခကြျမြား
ဘရနျ့ဖို့ဒျ ၁-၁ ဘရိုကျတနျ
ဆောကျသမျတနျ ၁-၂ ဝကျဟမျး
ဝကျဖို့ဒျ ဝ-၁ ဝုဖျ
အဲဗာတနျ ၂-၀ ဘနျလေ